Nosamborina fa Voampanga Noho ny Fanarahana ny “Mpaka Fanahy” Ilay mpisera Twitter Saodiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Febroary 2013 9:02 GMT
Nosamborina indray i Bader Thawab, mpisera Twitter Saodiana tamin'ny volana Septambra 2012 satria nanoratra sioka miantso ho amin'ny fanonganana ny fitondram-panjaka Saodiana. Anisan'ireo nandefa sioka mivantana ny fandehan'ny fangalana am-bavany fohy voalohany nandritra ny fotoam-pitsaranan'ny Fikambanana Saodiana miaro ny Zo sivily sy politika (ACPRA) izy.
Niezaka ny hahazo ny dika mitovy amin'ny fiampangana azy ny mpanao gazety Iman al-Qahtani.
Hoy izy nisioka [ar]:
@ImaQh: Ho alefako eo avy eo ny lisitr'ireo fiampangana hanenjehana an'i Bader Thawab. Pejy roa no misy azy ka somary sarotsarotra ny hahazo ireo dika tafaporotsaka.
Ny pejy voalohany tamin'ireo fiampangana, via @ImaQh
Androany izy no nandefa ireo pejy roa (pejy voalohany sy faharoa). Toy izao ny fehin'ny famotopotorana [ar]:
..ary raha nanontaniana momba ny zavatra nolazainy tao amin'ny kaonty Twitter-ny: “miala ny fitondram-panjaka Saodiana,” sy ny zavatra tiany lazaina ary ny antony nanoratany izany izy, dia nilaza fa tena nataony tao amin'ny Twitter-ny izany ary ny firodanan'ny fitondrana no tiany ambara, fa tsy ny fianakaviana, satria tsy zakany ny [fisian'ny] mpanjaka mpandova sy ny fandovana fitondram-panjaka ary nilaza izy fa manaraka olona ao amin'ny Twitter, anisan'izany i Dr. al-Masari, Dr. Abdullah al-Hamid sy Dr. Mohammad al-Qahtani.
Mpanohitra politika avokoa ireo telo ireo. Ny voalohany dia i al-Masari, izay nitsoa-ponenana nanomboka tamin'ny 1994. Ny roa hafa kosa dia anisan'ireo mpiara-manorina ny ACPRA.
nanoratra fanambarana tao amin'ny habaka media sosialy Twitter izy izay manakorontana ny saim-bahoaka sy manohintohina ny firaisam-pirenena ary voampanga ho manaraka ireo mpanao ratsy sy mihantsy ny fitondrana izy.
Nangataka ny fampiharana ny andininy faha-6 momba ny lalànan'ny Cybercrime [ar] [heloka bevava an-tserasera] ny mpampanoa lalàna, izay sazy toy izao:
Sazy an-tranomaizina mety ho tafakatra hatramin'ny 5 taona sy onitra mety ho tafakatra Telo tapitrisa riyals [~800,000USD], na ny iray amin'ireo sazy ireo ihany.